Mürselpaşa Boulevard ရှိအသွားအလာစီးဆင်းမှုသည်ပြောင်းလဲနေသည် - RayHaber
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirအာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! .. Mürselpaşa Boulevard အတွက်ယာဉ်အသွားအလာ Flow ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်
22 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ယာဉ်အသွားအလာစီးဆင်းမှုအတွက် izmirliler အာရုံကို Murselpasa Bulvari ပြောင်းလဲနေပါတယ်
Çiğliစွန့်ပစ်ရေကုသမှုစက်ရုံအလုပ်သန့်ရှင်းရေးMürselpaşa Boulevard ကနေဆောင်သော၏ပြည်တွင်းစွန့်ပစ်ရေစုဆောင်းလိုင်းထွက်ပေါက်အပိုင်း 23 စက်တင်ဘာလ၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုYeşildereလမ်း Basmane ဦးတည်ချက်မှာပြုမိပါလိမ့်မည်ထံမှအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။
Izmir ရေ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အကောက်ခွန်၏ Sewerage အထွေထွေညွှန်ကြားမှုများနှင့်အလံဟာစုဆောင်းလိုင်း၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအကြား 6,2 ကီလိုမီတာတင်ဆောင်လာသောစည်ပင်သာယာရေဆိုးမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဘူတာ။ Mürselpaşaအဆိုပါ Boulevard ကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်လုပ်ဖို့အလုပ်သန့်ရှင်းရေးဖို့အသွားအလာစီးဆင်းမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်လိမ့်မည်။
Mürselpaşa Boulevard လမ်းYeşildereအဆိုပါ Dokuz Eylul ရင်ပြင်၏အဘို့ကိုယူဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) က, 23 စက်တင်ဘာလ 2019 10.30 နာရီတနင်္လာနေ့အသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ ပျော်စေအလုပ်အချင်းစုဆောင်းလိုင်းအတွက်22,2 မီတာယူနစ်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အတိုင်းအတာYeşildereအတွင်း 20 ရက်ကြာလှုပ်ရှားမှုများ Dokuz Eylul ရင်ပြင် (Basmane) ၏ထွက်မယ့်အစားလမ်း Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လက်မှုပညာစက်ရုံ (ယခင်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအဆောက်အဦ) သို့သွားလိုသောမော်တော်ယာဉ်ဆိပ်ကမ်းရှေ့ဖို့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ Bornova အတွက် Dokuz Eylul ရင်ပြင် /Karşıyaka အဆိုပါ devices တွေကိုသင်အသွားအလာမှအပိတ်လမ်းကိုသွားချင်သောဦးတည်ချက်ဖို့ပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirlilerBostanlıနှင့်Halkapınardအသွားအလာအစီအစဉ်များကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည် 12 / 05 / 2016 အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirlilerBostanlıနှင့်Halkapınardအသွားအလာစည်းမျဉ်းဖြစ်လိမ့်မည်: Bostanlıနှင့်အစီအစဉ်များပြုကြောင့်Halkapınarအလုပ်အတွက်လုပ်ပါလိမ့်မည်ထိုဒေသတွင်အတွက်လမ်းများပိတ်ထားကြလိမ့်မည်။ အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျောရိုး Izmir ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတူဖွဲ့စည်း, ရထားလမ်း, ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လျှင်မြန်စွာဆက်လက် Karşıyaka ဒါဟာလမ်းရထား၌ကြီးသောအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်စေတော်မူပြီ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုထောကျပံ့နိုင်ရန်အတွက်မြို့ပြယာဉ်ကြောနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသက်ရှူဖို့ Karşıyakaအဆိုပါလမ်းရထားပရောဂျက် -Konak ဆောက်လုပ်ရေးပြင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်နေစဉ်, Mele အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းများ၏အခြားဘက်မှာစွန်Bostanlı Stream ခလုတ်ကိုတံတားရှေးဟောင်းသုတေသနရန်ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဒေသများတွင်လည်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စဉ်အတွင်းအသွားအလာပမာဏကို minimize လုပ် ...
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! ခရစ်စမတ်သစ်ကိုအသွားအလာအစီအစဉ် setting 26 / 12 / 2017 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့အိမ်ကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (မနက်ဖြန်) ကသစ်ကိုအသွားအလာ layout ကိုစတင်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Konak နှင့် Alsancak ဒီဇင်ဘာလ 27 အတွက်လမ်းရထားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သောကွောငျ့, ဇန်နဝါရီလ22018 အင်္ဂါနေ့မှရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သတင်းများအရခရစ္စမတ်ပြင်းထန်မှုစဉ်အတွင်းသစ်ကိုလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုရှိကွောငျးစိတ်ကူးနှင့်အတူပြဿနာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းရထားအိမ်ကြီးအလုပ်လုပ်တယ်အောင်နေဖြင့် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့အသွားအလာပုံစံများမနက်ဖြန် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27) ကိုသစ်ကိုတစ်နှစ်မှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ဖျော်ဖြေခံရဖို့အပြောင်းအလဲများကိုကြေညာခဲ့သည်။ ခရစ္စမတ်စျေးဝယ်သစ်ကိုအသွားအလာလမ်းကြောင်းလိုက်လျောညီထွေအတွက်ပြဿနာများ၏ပြင်းထန်မှုစဉ်အတွင်း၏အတွေးမှာတွေ့ကြုံရနိုင်, Cankaya နှင့်22018 သစ်ကိုလျှောက်လွှာဇန်နဝါရီလအတွင်းကြေငြာခဲ့သည် Alsancak မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်အင်္ဂါနေ့ကနေစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အတွက်Fevzipaşa Boulevard ...
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler, İZBANန်ထမ်းမနက်ဖြန်အလုပ်စွန့်ခွာ 07 / 11 / 2016 အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler, İZBANန်ထမ်းမနက်ဖြန်အလုပ်စွန့်ခွာ: izban အကျပ်အတည်းစာချုပ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်မနက်ဖြန်အောင်မြင်မရနိုငျသောကြောင့် izban Izmir ၏လုပျငနျးအကျပ်အတည်း izban ကြုံနေရကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ İZBANအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းကိုအကြားစုပေါင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်မီးရထားနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သူကပြည်ထောင်စုဒဏ်ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ယူခဲ့ပါတယ်။6အချိန်ဇွန်လကတည်းကဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အပေးအယူများနှင့်သဘောတူညီချက်ဒဏ်ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရရှိခဲ့သည်။ site ကို, ဘူတာရုံအော်ပရေတာ, ထိန်းသိမ်းနည်းလုပျငနျးအလုပ်လုပ်İZBANမောင်းနှင်မှုရုံးဝန်ထမ်းများအတွက်မနက်ဖြန်ချန်ထားမည်သင်ယူခဲ့သည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစီအမံများကိုယူ။ İZBANလမ်းကြောင်းအတွက် ESHOT နှင့်အချိန်အတွက်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ဝယ်ရန် system ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကူးတို့ပိုလုပ်ဖို့သင်ယူလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်သော ...
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်ချိန်ခွင်လျှာလွှဲပြောင်း၏အဟောင်းတွေအမျိုးအစားများကိုစတင်နေပြီ 21 / 01 / 2017 အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! အဟောင်းတွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်ချိန်ခွင်လျှာလွှဲပြောင်းအမျိုးအစားများစတင်နေပြီ: အနိမ့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးİzmirliler, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်၏ယခင်အမျိုးအစားကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေ, ငါ Izmir ကဒ်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ကဒ်နှုန်းအများဆုံး 300 လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ESHOT ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်အသုံးပြုမှု၏ယခင်အမျိုးအစားထဲမှာချိန်ခွင်İzmirimကတ် 16 ဇန်နဝါရီလကနေလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပိတ်ထားခဲ့သည်။ ကဒ်လွှဲပြောင်းရန်အဟောင်းကိုကဒ်အောက်ပိုင်းကန့်သတ်İzmirimဖြစ်စဉ်ကိုမပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်သည်အထိထို့ကြောင့်ဤနှစ်ကုန်မှာလက်ကျန်ငွေလွှဲပြောင်းစင်တာများ (31.12.2017 နေ့စွဲ) ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြကြပါသည်။ ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမကတ်များများအတွက်တရားဝင်အနေဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာလွှဲပြောင်း, အမွေနှင့်အတူကတ်များပြည့်စုံသည် ...
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! 16 - ဒီဇင်ဘာလတွင်အလုပ်လုပ် 17 မြေအောက်ရထား! 06 / 12 / 2017 Izmir မက်ထရိုက Metro Inc ကိုမှ Izmir အသစ်ကစည်းမျဉ်း Going ။ ထို့ကြောင့် 16 December- 17 ဒီဇင်ဘာလက Metro န်ဆောင်မှုတစ်ခုကာလဘာသာရပ်အပေါ်İzmir Metro Inc ကိုရဲ့ web site ကိုအပေါ် posted ကြေညာချက်၌ပြစ်မှားမိလို့မရနိုင်ပါ, ကထပ်မံပြင်းထန်လာဖို့မြေအောက်ရထားလေ့လာရေးခရီးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလုပ်အချက်ပြလုပ်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာတော့စနေနေ့မှာဒီဇင်ဘာ 16 23.00 ဒီဇင်ဘာလ၌တနင်္ဂနွေနာရီ 17 ဖို့ကမြေအောက်ရထားအချိန် 12.00 ၌ပြစ်မှားမိမရနိုင်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါကြေညာချက် ESHOT များအတွက်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်ဤအချိန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးခံရဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! ခရစ်စမတ်သစ်ကိုအသွားအလာအစီအစဉ် setting
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! 16 - ဒီဇင်ဘာလတွင်အလုပ်လုပ် 17 မြေအောက်ရထား!
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! အခုတော့အဲဒီမှာလမ်းမပေါ်တွင် Tram!
İzmirliler .. အာရုံစူးစိုက်မှု, Allowed အဆိုပါအိမ်ကြီးမှလျှပ်စစ်ဓါတ်ရထားလိုင်း
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကင်ပိန်းအတွက်အနုပညာလက်ရာ ESHOT အပြောင်းအလဲများ
လမ်းဆုံလုပျငနျး Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏နယ်ပယ်အတွင်းအသွားအလာများစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲသွားပြီ